Labo qof soomaali ah oo ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay deegaanka Svolvær. - NorSom News
Labo qof soomaali ah oo ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay deegaanka Svolvær.
Fiidnimadii sabtida, baabuur ay saarnaayeen sadex qof oo soomaali ah ayaa ku dhacay biyaha badda ee deegaanka Svolvær ee woqooyiga dalkan Norway. Waxaana halkaas uu dhaawac kusoo gaaray sadexdii qof ee baabuurka saarnaa, kuwaas oo markii danbe loo duuliyay isbitaalka magaalada Tromsø.
Sida ay NorSom News u xaqiijiyeen masuuliyiinta jaaliyada soomaaliyeed ee deegaanka Vågan, sadexda qof ee baabuurku uu biyaha kula dhacay ayaa kala ahaa, gabar dhalinyaro ah iyo hooyadeed, iyo wiil isna sodomeeyo jir ah oo katirsanaa soomaalida deegaankaas kunool.
Booliska ayaa isla sabtidii xaqiijiyay in mid kamid ah sadexdii qof oo aheyd gabar dhalinyaro ah ay u geeritootay dhaawacii kasoo gaaray shilka.
Isbitaalka magaalada Tromsø ee lagu daaweynayay dhaawaca labada qof ee kale, ayaa saaka sheegay in nin sodomeeyo jir ah uu xaley u geeriyooday dhaawicii shilka baabuurka kasoo gaaray.
Waxeyna sidoo kale sheegeen in xaalada haweeneyda kale ee dhaawaca ah, ay tahay mid wali halis kujirto.
Booliska ayaa warbaahinta u sheegay inay heleen xog ku aadan qaabka ay wax u dhaceen, balse ay wali wadaan baaritaanka dhacdadan. Iyaga oo sheegay inay wareysiyo ka qaadayaan dad ka ag dhawaa goobta uu shilku ka dhacay.
Deegaanka Vågan iyo magaalooyinka yar yar ee hoos taga ayaa waxaa naloo sheegay inay ku kunoolyihiin ilaa 100 qof oo soomaali ah. Waxeyna dhacdadan shilka noqoneysaa tii labaad oo soomaalida deegaankaas ay la kulmaan labo bil gudaheed.
Bishii lasoo dhaafay wiil dhalinyaro soomaali ah ayaa ku haftay biyaha badda, kaas oo markii danbe u geeriyooday dhaawicii kasoo gaaray shilkaas.
Xigasho/kilde: Mann i 30-årene døde etter at en bil kjørte i vannet i Svolvær
Kilde 2: Mann døde etter ulykken i Svolvær
Previous articleIran: Waxaan Norway uga digeynaa inay USA daba-raac u noqdaan.
Next articleListhaug iyo Frp oo Mar kale hadal qabsi ka dhigtay soomaalida.
Askarigii ceejiska dhulka ku dhigay wiilka soomaaliga ee xiran oo hadlay.
Keydka NorSom Velg måned juli 2020 (24) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (78) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (62) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (40) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)